Cilmi-baaris cusub: Tallaalka xoojiya tallaalka COVID-19 90% waxtar u leh Omicron
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Caafimaadka » Cilmi-baaris cusub: Tallaalka xoojiya tallaalka COVID-19 90% waxtar u leh Omicron
Daraasado cusub: Tallaalka xoojiya tallaalka COVID-19 90% waxtar u leh Omicron
Dadka Maraykanku waa inay helaan dhiirigelin haddii ugu yaraan shan bilood ay ka soo wareegtay markii ay dhammeeyeen taxanahooda Pfizer ama Moderna, laakiin malaayiinta xaqa u leh ma helin.
Saddex daraasadood oo cusub oo Maraykanku sameeyay Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (CDC)) ayaa shaaca ka qaaday in tallaalada Pfizer-BioNTech iyo Moderna ay 90% wax ku ool u ahaayeen ka ilaalinta dadka cusbitaalka ka dib markii ay ku dhaceen noocyada Omicron ee fayraska COVID-19.
Qiyaasaha xoojiyeyaasha ayaa si aad ah waxtar ugu leh ka hortagga omicronisbitaal dhigashada la xiriirta, sida laga soo xigtay CDC.
Xoojinta jabsku waxay sidoo kale 82% waxtar u lahaayeen ka hortagga waaxda xaaladaha degdegga ah iyo booqashooyinka daryeelka degdegga ah, xogta cilmi-baarista ayaa muujisay.
Cilmi-baadhistu waxay ka koobnayd daraasadihii waaweynaa ee ugu horreeyay ee Maraykan ah si loo eego ka hortagga tallaalka omicronsida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
"Mareykanku waa inay helaan taageero-bixiyeyaasha haddii ugu yaraan shan bilood ay dhaafto tan iyo markii ay dhammeeyeen taxanahooda Pfizer ama Moderna, laakiin malaayiin kuwa xaqa u leh ma aysan helin," CDCEmma Accorsi, mid ka mid ah qorayaasha daraasadda ayaa tiri.
Waraaquhu waxay ku celceliyaan cilmi-baaris hore - oo ay ku jiraan daraasado laga sameeyay Jarmalka, Koonfur Afrika iyo Boqortooyada Ingiriiska - oo muujinaya tallaalada la heli karo ay aad uga waxtar yar yihiin Omicron marka loo eego noocyadii hore ee coronavirus-ka, laakiin sidoo kale in qiyaasaha xoojiyaha ay dib u soo nooleeyaan unugyada ka hortagga fayraska si loo kordhiyo fursadda ka fogaanshaha. caabuqa calaamadaha.
Africa CDC Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Covid-19 Pfizer Koonfur Afrika Boqortooyada Ingiriiska Aqalka Cad
Khamri dhaldhalaalaya oo ka yimid Isbaanishka loolanka "Guys Kale"
New Northern Pacific Airways waxay yeelan doontaa muuqaal Alaska
FDA waxay siisay dawada agoonta loogu talagalay T-Cell Lymphoma...
Daawo Cusub oo Baadhitaan ah oo loogu talagalay Cudurka 'Myeloid Leukemia'
Cudurka Autism spectrum wuxuu bilaabmi karaa yaraanta
Rum, Barbados, iyo Brazil ee Suuqa Safarka Adduunka ee Laatiinka...
IPhone cusub ayaa ka tagay Dalxiiska Mareykanka ee Playa del...
Condor cusub oo aan joogsi lahayn Frankfurt ilaa Phoenix iyo Portland...
Dalxiiska Seychelles waxay xoojisaa xidhiidhka muhiimka ah ee GCC
Suuqa Qalabka Beeraha Hadda iyo Mustaqbalka...
Diyaaradda Turkish Airlines ayaa cusbooneysiisay qalabkeeda safarka
Duulimaadyo cusub oo ka imanaya Calgary iyo Vancouver ilaa Kelowna...
Hotelbeds waxay iskaashi la samaysaa B2B madal ballanta Xeni
Maxaa ka cusub Bahamas bisha Maarso
Daladda Caalamiga ah ee Horumarinta Horumarinta
Gubashada dhakhtarku waxay ku dhowdahay labanlaab inta lagu jiro COVID
Daraasad cusub oo caafimaad oo ku saabsan daawaynta dhijitaalka ah ee walaaca
Diyaarad cusub oo laga leeyahay dalka Canada ayaa magacawday Toronto Pearson...
Vista waxay heshay madal adeegyada duulista ee gaarka ah...
Dalxiiska Seychelles Waxay Martigalisaa ParrAPI Iibka Blitz
Shirkadda China Eastern Airlines ayaa joojisay duulimaadkeeda Boeing 737
Daraasad Cusub Oo Caddaynaysa Muusigga Canine-ka Waxay Yareeyaan Cadaadiska iyo...
Horyaalka Adduunka Japan ee Ganacsiga Maroodiga Sharci-darrada ah
U diyaar garowga Shirka Aaga Xorta ah ee Adduunka oo si heer sare ah loo...
Lufthansa Group waxay iibsanaysaa Boeing 777-8 iyo 787 cusub ...
Waaberi Cusub ee Dalxiiska Tansaaniya iyada oo loo marayo Premier...
Dalxiiska Hindiya iyo Soo-dhaweynta waxay muujinayaan 2021 oo ah Sannad...
Dalxiiska Abu Dhabi oo albaab cusub u furay adduunka
Xubnaha WTN ayaa ku qaylinaya "Do Svidaniya" si ay u...
Isbeddellada Socdaalka Caalamiga ah ee Aasiya-Pacific
Daawaynta Cudurka Alzheimers ee Hal-abuurka leh oo lagu...
Skål International waxa ay sharaf u tahay in ay ka qaybgasho...
Harry Johnson wuxuu ahaa tifaftiraha meelaynta eTurboNews mroe in ka badan 20 sano. Wuxuu ku nool yahay Honolulu, Hawaii, wuxuuna asal ahaan ka yimid Yurub. Waxa uu jecel yahay qorista iyo tebinta wararka.